शंकरप्रसाद शर्मा - विकिपिडिया
डा. शंकरप्रसाद शर्मा (२०१०-) नेपाली कूटनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ सन् २००९ अक्टोबरमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त हुनुभएको हो। त्यसै वर्ष नोभेम्बरदेखि उक्त पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ।
उहाँको जन्म २०१० असारमा काठमाडौंको गैरीधारामा भएको हो। उहाँका बुबाको नाम भीमप्रसाद उपाध्याय घिमिरे र आमाको नाम रमादेवी उपाध्याय घिमिरे हो। उहाँका दाजु, दिदी र बहिनी हुनुहुन्छ। उहाँका बुबाले जागीरको सिलसिलामा परिवारलाई ओखलढुंगाबाट काठमाडौं ल्याउनुभएको हो। उहाँले आमा-बुबाबाट अक्षर चिन्नुभयो। कक्षा ४को भएपछि लैनचौरको शान्ति विद्यागृहमा भर्ना हुनुभयो। कक्षा ६मा म पद्मोदय स्कुलमा भर्ना हुनुभयो। बुबा जागीरका लागि गोरखा गएपछि उहाँको पढाइ कक्षा ९ बाट गोरखा बजारको शक्ति विद्यालय हाइस्कुलमा भयो। कक्षा १० पनि त्यहिं स्कुलमा पढ्नुभयो र २०२३ सालमा एसएलसी दिनुभयो। सेकेन्ड डिभिजनमा पास हुनुभयो। उहाँले त्रि-चन्द्र कलेजमा बीएसम्म पढ्नु भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एम.ए. गर्नुभयो। डा. शर्माले अमेरिकाको हवाई राज्यको हवाई विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी (पीएचडी) गर्नुभएको हो।
उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको पहिले सदस्य र पछि उपाध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार भइसक्नुभएको छ। शर्मा दक्षिण पूर्व एसिया अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुनुहुन्थ्यो। शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढाउनु भएको छ। उहाले विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) जस्ता संस्थामा सल्लाहकार भएर काम गर्नुभएको छ। विश्वका धेरै पत्रपत्रिकामा लेख लेख्नुभएको छ। उहाँले लेखेका र सम्पादन गरेका आठ वटा किताब छन्। अनि सम्पादन गरेका पत्रिका पनि छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=शंकरप्रसाद_शर्मा&oldid=408511" बाट निकालिएको
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०२:५४, ४ जुलाई २०१४ मा परिवर्तन गरिएको थियो।